बिचारा ! बच्चालाई दूध खुवाउँदा महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बा’ध्य पारियो – Ramailo Sandesh
बिचारा ! बच्चालाई दूध खुवाउँदा महिला प्रहरीलाई सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न बा’ध्य पारियो
काठमाडौं। ड्युटीमा रहँदा आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी एक महिलाको तस्वीर सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । पछि यी महिला कम्बोडियाकी प्रहरी अधिकारी रहेको जनाईएको छ । ती महिलाले ड्युटीमा रहँदा आफ्नो बच्चालाई दूध खुवाइरहेकी थिईन ।
यो फोटो भाइरल भएपछि ती महिलाका बरिष्ठ अधिकारीहरुले ती महिलालाई सार्वजनिक रुपमा गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्न बा ध्य पारे । अब यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै अधिकारको बहस सृजना भएको छ ।
यो पनि, ललितपुर प्रहरी परिसरको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला
महानगरीय प्रहरी परिसरको नेतृत्वमा पहिलो पटक महिलालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। आज भएको प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) हरूको सरुवा सूचीमा परेकी किरण बज्राचार्यले ललितपुरको नेतृत्व गर्दैछिन्।
२१ महीनादेखि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा रहेकी बज्राचार्यले अब ललितपुरको कमाण्ड सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी पाएकी छन्। ७ कात्तिक आइतबारदेखि लागू हुने गरी आज प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव श्रोत एवं प्रशासन विभागले ३३ जनाको सरुवा गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यसअघि तीन जिल्ला भक्तपुरमा तारादेवी थापा, पर्सामा गंगा पन्त र सिन्धुलीमा रञ्जु सिग्देलले जिल्ला कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्।
ललितपुरमा एसएसपी बज्राचार्य गएसँगै जिल्ला कमाण्ड सम्हाल्ने महिलाको संख्या चार हुनेछ भने उपत्यकाका तीन मध्ये दुई जिल्लाको कमाण्डर महिला हुँदैछन्। “ललितपुरको जिम्मेवारीमा संगठनले विश्वास गरेर पठाएको छ, त्यो विश्वास कायम राख्दै काम गर्नेछु”, उनले भनिन्, “ललितपुर विभिन्न जात, समुदाय र वर्गका मानिसको बसोबास भएको जिल्ला हो। सबैको आवाज सनुुवाइ गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछु भन्ने लागेको छ।”
यसअघि उनले २०७२ साल असोजमा पहिलो पटक जिल्ला कमाण्डरको रुपमा भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा हुँदा संगठित रुपमा मानव बेचबिखन गर्ने ‘संगठित मानव तस्कर समूह’ लाई पक्राउ गर्न सफल भएकी थिइन्। उक्त सफलतापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको भन्दै ‘टीआईपी रिपोर्ट हिरो’ को रुपमा सन् २०१६ मा सम्मानित गरेको थियो।
भारतमा नेपाली अभिनेत्री तथा मोडलको कल गर्ल पेसा, एक पटककै यति धेरै पैसा !
काजु खानुका छन् यस्ता सोच्नै नसक्ने फाइदाहरु